Dalagii dhiiyaatte kun, tuqaalee qonyoo ykn wantaa gara qonyootti jijjiiramee akka gulaaluuf siif hayyama. Sajoowwan armaan gadiitu jira:
Sajoon Tuqaalee Gulaali wantawwan Bézieriif, haalata gulaaluu akka kakaasuu yk kaka'uumsala tasiiftu siif hayyama. Haalata gulaaluu keessatti, tuqaaleen wanta fakkasaa mata mataan filatamuu nidandaa'a.
Haalata isa ati tuqaalee ittiin siqsuu dandeessuu kakaasa. Qareen hantuuttee yammuu tuqaa irra tahu arfakkuu duwwaa xinnoo agarsiisa. Tuqaa sana bakka biraatti harkiisi. Sochii qonyoo kan tuqaa moggaalee lachanii irraa faana bu'a; kutaan qonyoo tuqaalee ittaanuu gidduu boca jijjiira.
Qonyoo tuqaalee lama gidduutti ykn qonyoo cufaa keessaa xiyyeefadhu kana booda, osoo unkichii hingooliin akka guutuummaa qonyoo jijjiiruuf hantuuttee harkiisi.
Haalataa saaguu kakaasa. Haalataan kun, akka ati tuqaalee saagduu siif hayyama. Akkasuumas tuqaalee akkuuma haalataa siqsuu keessatti siqsuu nidandeessa. Haatahu malee, yoo qonyoo tuqaalee lama gidduu cuqaastee, hantuuttee xinnoo turtee qabduu hantuuttee gad-dhiibdee, tuqaa haaraa tokko saagda. Tuqichii, tuqaa siimessa dha, akkasuumas sararawwanii tuqaalee too'atanii walmaddiidhaaf yammuu siqan hinjijjiiraman.
Yoo tuqaa xiyyoo uumuu barbaaddee, jalqaba tuqaa lachan siimessa tokko ykn walqixxaa tokko, isa kana booda Tuqaa Xiyyaa fayyadamuudhaan gara tuqaa xiyyootti jijjiiramuu saaguu qabda.
Tuqaalee filataman keessaa tokko ykn hedduu haquudhaaf, sajoo Delete Points fayyadami. Yoo tuqaalee hedduu filachuu barbaaddee, qabduu Shift gad-dhiibdee tuqaalee warra sirii tahan irra cuqaasi.
Akka tuqaaleen haqamuf jalqaba filadhu, kana booda sajoo kana cuqaasi, ykn Del dhiibi.
Sajoon Qonyoo Addabaa , qonyoo addabaasa. Bakka qonyoo addabaasuuf barbaadduutti, tuqaa ykn tuqaalee filadhu, kana booda sajoo cuqaasi.
Qonyoo sarara qajeeelaatti ykn sarara qajeeelaa qonyootti jijjiira. Yoo tuqaa baqee tokko filattee, qonyoon tuqicha duraa nijijjiirama. Yoo tuqaa lama filattee, qonyoon tuqaalee lachan gidduu jiran nijijjiirama. Yoo tuqaalee lama caalan filattee, yammuu hundaa sajoo kana cuqaastuu, kutaan adda addaa qonyootu nijijjiirama. Yoo barbaachiisaa tahee argamee, tuqaalee korboo gara tuqaalee qonyootti akkasuumas tuqaalee qonyoo gara tuqaalee korbootti jijjiiramuu dandaa'a.
Yoo kutaan qonyoo keessaa bakkii tahe loomaa tahee, bakkii xumraa sararaa, yoo bayatee tuqaa too'annaa tokko mata mataan qaba. Sararii loomaan deebii'ee gara qonyootti hamma hinjijjiiramanti, gara tuqaalee korbootti fooyya'uu hindanda'anu.
Tuqaa ykn tuqaalee filataman gara tuqaalee qonyootti jijjiira. Tuqaaleen konyoo, tuqaalee too'annaa socho'aan warra tokkoon tokkoon saanii ofdanda'oo lama qaba. Kanaafuu, sararii qonyoo qixaan tuqaa qonyoo gidduu hindeemu, garuu qonyoo uuma.
Tuqaa qonyoo tokko ykn tuqaa walqixxaa gara tuqaa siimessaatti jijjiira. Lachan tuqaalee too'annaa kan tuqaa qonyoo walmaddiin hiriiruu, akkasuumas walfaanaa qofa siquu dandaa'u. Dheerinii tuqaalee too'annoo addaa, akka digirii qonyoo addaan siif baasuu hayyamuu tahuu mala.
Sajoon kun, tuqaa qonyoo ykn tuqaa siimessaa gara tuqaa walqixxaatti jijjiira. Tuqaaleen too'annaa kan tuqaa qonyoo lachuu, walmaddiin hiriiruu akkasuumas dheerina walqixee qabu. walfaana qofaa sochoo'u akkasuumas digirii qonyoo qixa lachutiif tokkicha.
Sarara ykn qonyoo cufa. Sararri kan cufamu tuqaa jalqabaa tuqaa ishee dhumaa iskuweerii guddifamteen agarsiifamtu walqbsiisudhaani.
Akeekii ammee ykn akeekiiwwan filaman haquuf mallattoo irratti godha. Kun kan ta'uu danda'u yoo akeekiin kan sarara sirriirra jirtu ta'ee dha. Yoo sajoo Gara Qonyoo Jijjiiri tiin qonyoo tokko ykn rogaddee tokkoo, sarara loomaa tokkotti jijjiiruuf, ykn gara sarara loomaa tokkotti jijjiiruuf, ykn qonyoo tokko hantuutteedhaan akka tuqaan sarara loomaa irra oolutti yoo jijjiirte, ni haqama. Kofa hir'inni tuqaa irratti akka ta'u kan qinda'uu danda'u, Meeshaalee - Dirqalaawwan - Draw LibreOffice - Tarsaa filachuudhaanii, durtiin 15° kan qinda'uu danda'uu, Meeshaalee - Dirqalaawwan - Impress LibreOffice - Tarsaa durtiin 15° dha.
Title is: Kabala Tuqaalee Gulaali